Ny soritr'aretin'ny Uterine Fibroids🥇, fitsaboana ary ny mety ho antony.
Uterine Fibroids: Sintona, fitsaboana ary mety ho antony.
Ny vehivavy tsirairay amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy niatrika a fibroma, na farafaharatsiny mahalala olona izay manana. Fibroids no tena fahita, ny fivontosana matetika indrindra amin'ny lalan-dra , misy fiantraikany hatramin'ny 70% amin'ireo vehivavy miteraka fotoana fiterahana, indrindra eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 50 taona aorian'io mitsahatra amin'ny fananahana.
Fantatra ihany koa fibroids, fibroids o fibroids, ny fihanaky ny fivontosan'ny fibra mibontsina dia Benigno ny iray amin'ny sosona ny tranonjaza antsoina myometrium.
Na dia tena mahazatra aza izy ireo, ny tena antony mahatonga ny fibroids dia mbola tsy fantatra mazava. Fantatsika fa amin'ny ankapobeny dia mipoitra izy ireo ho valin'ny a tsy mahay mandanjalanja, izay novokarin'ny estrogens sy progesteron.
Sintona avy amin'ny Fibroma Uterine
Ny fibraidan'ny uterine mandritra ny fitondrana vohoka
Fibroids sy infertility
Sintona ny a Uterine fibroma
Ny ankamaroan'ny fibroids dia feno tanteraka asymptomatic, ary ny fizahana dia mitranga aorian'ny fisian'ny fahitana amin'ny ultrasound. Izany hoe, ny ankamaroan'ny vehivavy dia mahita ihany fa manana fibre izy ireo rehefa manao ultrasound pelvika hanadihady aretina hafa na a mahazatra gynecological.
Noho izany, ny fibra dia tsy nahatonga soritr'aretina hatramin'izao, ary mety hangina mandritra ny sisa amin'ny fiainana lonaka ao amin'ny vehivavy, miverina amin'ny fihenan'ny hormonina menopause. Ity no tantaran'ny vehivavy manana 75% Fibroids.
Ny sisa 25%, etsy ankilany, dia misy soritr'aretina mifandray amin'ny myoma, na dia amin'ny ankapobeny aza dia soritr'aretina kely fotsiny izy ireo ary tsy dia misy fiatraikany amin'ny fiainana andavan'andro. ny soritr'aretina mahazatra indrindra Izy ireo dia:
Fahatsapana mavesatra ao anaty kibo
Feno haingam-pandeha mivezivezy, ary misy clots
Fanaintainana mandritra ny firaisana ara-nofo
Ny fanaintainan'ny pelvika
Ny fanalan-jaza miverimberina
Matetika urination, noho ny fahatsapana ny lalan-dra
Ny fivontosan'ny tsinay dia noho ny fahatsorana rectosigmoid
Ny fitotonganan-drà be loatra mandritra ny fadimbolana.
Tsy fahatoniana ao anaty
Mahatsiaro faharerahana ao amin'ny faritra pelvis
Hirifiry mandritra ny firaisana ara-nofo
Izany rehetra izany dia midika fa ny fibroids dia tsy maintsy tsabo ary matetika nesorina ny fandidiana.
Aorian'ny fitsirihana sy famaritana ny fibre amin'ny alàlan'ny sary dia manapa-kevitra ny dokotera sy ny marary raha ilaina ny manatona haingana na raha toa ka afaka ampiana fotoana bebe kokoa ny fibra mba hanombanana raha hitombo ny lesion na raha afaka miteraka soritr'aretina.
Ho an'ny vehivavy tsy te ho bevohoka izao dia efa nitombo ny fadimbolana, mampiditra a fitaovana famoahana hormonina famotsorana intrauterine Vahaolana lehibe izany, satria mampihena na hanelingelina ny fadim-bolana aorian'ny volana vitsivitsy.
Tsiahivina: ireo IUD hafa, toy ny varahinatsy aseho satria afaka mampitombo ny fadimbolana sy kibo.
Ho an'ny vehivavy manana infertility, izay mety hisy fiantraikany ny fibra kibo sy ny fametrahana ny embryon, ny safidy heverina indrindra fitsaboana fanidiana miaraka amin'ny fanesorana ny fibre (myomectomy).
Azontsika atao ny manasokajy azy ao 4 karazana araka ny filazanao toerana (sy ny soritr'aretina sy ny loza ateraky ny tranga tsirairay):
subserosal: Io no mivelatra indrindra amin'ny rindrin'ny tranonjaza, manisy protuberance ivelan'ny tranonjaza. Satria izy ireo ivelany kokoa, ny fibroids be loatra dia tsy miteraka fanaintainana be ary amin'ny ankapobeny aza manelingelina fiterahana na ny fampiharana ny embrio. Fa raha efa lehibe ( mihoatra ny 5 cm ), dia mety hiteraka fiovana eo amin'ny fihenan-jaza ary hampandefitra ny fiterahana, ankoatra ny famoronana fiantraikany faobe amin'ny taova mifanakaiky, toy ny fivontosana (fametahana ny urine) sy ny tsinaina.
pedicle: Mitombo amin'ny mampifandray amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny tranobe manify antsoina hoe pedicle.
Intramural: Hita ao amin'ny rindrin'ny tranon-jaza izy io, manova ny endrika mitroka rehefa lehibe, lehibe kokoa noho ny 5 cm ny savaivony, ankoatra ny famokarana kasy. Amin'ny tranga izay misy fihenan'ny tsy fitoviana dia mety misy ny fibre intramural mampihena ny vintana bevohoka.
submucosal- Ao amin'ny rindrina anatiny indrindra amin'ny tranonjaza, eo ambanin'ny endometrium, izay misy ny embryonika, ary mitombo ao amin'ny voan-tranonjaza. Izy io matetika no karazana fibroid mifandraika kokoa amin'ny rà sy ny tsy fahampiana.
Una myomectomy Azo atao amin'ny fomba isan-karazany. Ny invasive kely indrindra dia amin'ny alàlan'ny a hysteroscopy, izay fidirana ho an'ny fibro ambolosiana hatramin'ny 4-5 cm amin'ny alàlan'ny cervix ary tsy misy tapaka ao amin'ny hoditry ny marary.
Noho ny rafitra scalpel elektrika dia azonay nesorina ny fibroose submucosal niaraka tamin'ny hysteroscope mihitsy. Matetika any amin'ny toeram-pitsaboana, matetika izy io, nefa azo atao am-pahasalamana. Ny vanim-potoana aorian'io fotoana io dia tony ary ny ankamaroan'ny vehivavy dia tsy mahatsapa fanaintainana.
Na izany aza, ny hysteroscopy irery ihany no mamaha ireo trangan'ny fibroôsôbôtinina miendrika tenda izay natao ho an'ireo zaka bitika kely kokoa, noho ny fameperana ara-teknika amin'ilay làlana io.
Hatramin'ny tsy mbola voafaritry ny antony manokana ny fibroids. tsy misy fomba azo atao marina manakana ny fitomboana na ny fisehoan'ny fibroids, izay antsointsika ho fisorohana laharam-pahamehana sy faharoa. Na eo aza izany dia misy fikambanana maromaro ao amin'ny literatiora ara-pitsaboana eo anelanelan'ny fibroids, sakafo, ary ny fomba fiaina sasany izay mety manondro ny fomba fisorohana.
Ireto ny sasany soso-kevitra mampanantena izany fa hampihena ny risika ateraky ny fibroids ary fara fahakeliny no hahasalama anao sy hampitombo ny fitomboanao:
Fananan-tena ara-batana: Ny famelana ny fomba fiaina dia mampihena ny fizotran'ny fanaintainana manerana ny vatana, manakana ny fivoaran'ny fivontosan'ny benign, premalignant ary ny malignant lesoka.
Sakafo ara-pahasalamana: Ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny vehivavy mihinana hena sy tavy dia mihinana fibroids. Iza no mihinana be voankazoNy hena, legioma ary manana antioxidant avo be izay miaro ny tranonjaza amin'ireto ratra ireto.
Sakafo misy zotram-gizika avo- Ny hatsembohana, ny mofo fotsy, ny pasta, ny mofomamy ary ny siramamy voadio dia mahatonga ny tsindrona amin'ny insuline izay tsy mandanjalanja ny homeostasis hormonina amin'ny vatana ary mety hampitombo ny fibroids.
Mifehy ny fisotroana toaka- Amin'ny fatra lehibe, ny alikaola dia tsy tsara ho an'ny taova rehetra ao amin'ny vatana, mampitombo ny risika ny fihanaky ny sela sy ny ratra izay mitondra amin'ny fivontosana toy ny fibroids.
Tsidiho tsy tapaka ny mpitsabo aretin-tsaina: Ho fanampin'ny fanazavana ny fanontaniana mety anananao momba ny fibroids na aretina gynecological hafa. Ny mpitsabo aretin-tsaina dia hiantoka fa manao ny fisorohana rehetra ilaina ianao ary hanadihady rà tsy ara-dalàna, fanaintainana fifandraisana, fahatsapana fahaketrahana, kibo na soritr'aretina hafa izay mety misy ifandraisany amin'ny fibroids, manao diagnostika voalohany ary mametraka fitsaboana tsara indrindra.
Ny fisian'ny fibre fotsiny tsy manana fifandraisana mivantana amin'ny fiterahana ny vehivavy. Amin'ny fampiharana, ny fibre dia mety manasarotra ny fitondrana vohoka ary mifarana ny vehivavy bevohoka aorian'ny fongorana azy. Fa matetika dia sarotra ny milaza fa ny fibre dia tena tompon'andraikitra amin'ny tsy fahampiana ary tsy ho bevohoka mihitsy ilay vehivavy, na dia nitazona ny fibra aza izy.
Araka izany, ny fikarohana dia mampiseho fa ny fibro dia tsy misy afa-tsy 4% amin'ny tranga tsy fiterahana. Tsy midika io fa ny 96% amin'ny tranga dia tsy manondro ny fisian'ny fibre, fa manondro izany izy ireo, amin'ny 96%, Ny fibroma ihany no tsy antony lehibe na manakana ny fitondrana vohoka.
Ny fibroid dia manelingelina amin'ny fiterahana miankina amin'ny anao habe y toerana.
ny fibroids submucosal amin'ny haben'ny ary fibroids intramural lehibe, mihoatra ny 4 na 5 cm no misy ifandraisany tsy fiterahana. Matetika ireo dia miteraka ny fahadisoana miverimberina amin'ny alàlan'ny fanitsakitsahana ny anatom-bavy ary ny fisorohana ny fampidirana tsara ny embryonoma amin'ny endometrium. Hita tamin'ny fandinihana fa misy ny tahan'ny rehetra more Baja bevohoka, fametrahana ny embryonie sy ny fivoaran'ny fitondrana vohoka.
Raha jerena izany rehetra izany, Ny fibroids intramural kely sy fibroids subserosal dia heverina ho tsy ilaina amin'ny fitomboana. Izany dia satria tsy misy fiantraikany amin'ny endometrium..
Coachlear implant -.
Ahoana ny fomba fitsaboana ny menopausal soritr'aretina?